Avibase - ကမ္ဘာ့ Bird ကိုစစ်ဆေးရမည့်စာရင်း
ဤရွေ့ကားစစ်ဆေးရမည့်စာရင်းဤအချိန်တွင်ရရှိနိုင်ပါကအကောင်းဆုံးသတင်းအချက်အလက်အပေါ်အခြေခံထားတယ်။ သူတို့ကကျွန်မနှစ်ပေါင်းများစွာကျော် collated ကြောင်းသတင်းရင်းမြစ်များကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးအပေါ်အခြေခံကြသည်နှင့်အဆက်မပြတ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောနေကြသည်။ ငါငှက်ကြည့်ခြင်းတစ်ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်ဤအစစ်ဆေးရမည့်စာရင်းကမ်းလှမ်းရန်ဝမ်းသာပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့တိအချို့ကိုအဆင့်အထိဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်မည်သည့်အမှားရှာတွေ့ပါက, တှနျ့ဆုတျပါဘူးကျေးဇူးပြုပြီး .
ကမ္ဘာ့ဖလား၏ Bird ကိုစစ်ဆေးရမည့်စာရင်းဒီဇိုင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းထားက Denis Lepage အသုံးပြုပုံနှင့် Birdlife International ၏တစ်ဦး Co-မိတ်ဖက်ဖြစ်သောငှက်လေ့လာရေးကနေဒါကအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပသည့်ကမ္ဘာ့မှ Avibase နှင့်ငှက်လင့်များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
display စစ်ဆေးရမည့်စာရင်း: နိုင်ငံများ / နယ်မြေများ / ဒေသများ ပြည်နယ်များ / ပြည်နယ်များပါဝင်စေ အားလုံးက်ဘ်ဆိုက်များပြရန်
တစ်ဒေသ name ကိုရိုက်ထည့်ပါ:
Avibase သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီး ၃၄၁,၇၀၅,၆၇၉ 24 ဇွန်လ 2003 ကတည်းကကြိမ်. © Denis Lepage | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ